China Slurry Pump Expeller Ring orinasa sy mpamatsy | YAAO
Slurry Pump Expeller Ring dia ampiasaina amin'ny paompy slurry AH / HH / L / M, ny peratra expeller dia miara-miasa amin'ny expeller ho an'ny paompy slurry. Tsy vitan'ny hoe manampy amin'ny famehezana ny paompy fotsiny izy ireo, fa mampihena ny hery afovoany. Ny endrika sy ny fitaovan'ny expeller dia manan-danja amin'ny fiainany serivisy
Ity tombo-kase ity dia mety amin'ny ankamaroan'ny fampiharana pumping slurry. Manome tombony lehibe izy io fa tsy mila rano ny fihary. Mpanaparitaka mihazakazaka ao amin'ny peratra misy akora mitovy aminy ary miara-miasa amin'ireo banga any ambadiky ny valahana dia miantoka tombo-kase porofo mivaingana. Glandy mihosotra diloilo feno vozona sy peratra mitete mivoaka rehefa mikatona ny paompy. Ny lohan'ny fidirana dia misy fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny tombo-kase famoahana ary amin'ny toe-javatra iasana mahazatra ity karazana tombo-kase ity dia porofo mivoaka tanteraka.
Izahay dia afaka manome ny Expeller Ring misy akora fingotra isan-karazany ho an'ny fampiharana anao amin'ny tontolo sarotra
Kaody peratra famoahana pump pump slurry
Paompy slurry AH
Chrome avo, fingotra
Paompy slurry HH
M paompy slurry
Kavina mpivarotra paompy
Paompy grama G (H)
* YAAO® dia mari-pamantarana voasoratra anarana ary tsy misolo tena na tsy mifandray amin'ny Warman® ao amin'ny Weir Minerals Group. Ny anarana, tarehimarika, marika ary famaritana rehetra dia ampiasaina ho an'ny tanjona ihany fa tsy midika izany fa ny paompy na ny faritra voatanisa dia vokatry ny Warman Pumps.
* Ny peratra mpanondrana pump YAAO® slurry pump dia tsy azo afindra amin'ny peratra expeller Warman® slurry pump.
* Io antontan-taratasy io dia fananan'ny YAAO® Pump ary tsy azo averina navoaka amin'ny antoko fahatelo raha tsy nahazo alalana voasoratra.
Teo aloha: Volo vita amin'ny paompy slurry
Manaraka: AH Slaterry pump impeller